Tsy Misy Firenena Ho An’ny Fampihomehezana? Manenjika Ilay Indiana Mpanao Hatsikana Amin’ny Lahatsary Snapchat Ireo Mpanao Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2016 17:39 GMT
Amin'ny azo lazaina ho fihetsika faran-tampony taorian'ny zava-nitranga, nametraka fitoriana tany amin'ny polisy ary nandrahona an'ilay mpanao hatsikana, noho ny nandefasany lahatsary mananihany miresaka ireo olo-malaza Indiana roa ireo antoko politika avy amin'ny elatra havanana Indiana. Mazava ho azy, tsy fomba tena feno fahatsorampo hanehoana fandokafana any India ny fakàna tàhaka.
Ao amin'ilay lahatsary, Naka tàhaka niaro hanihany an'ilay Indiana mpilalao cricket fanta-daza, Sachin Tendulkar, sy ilay mpihira Bollywood tsy misy toa azy, 86 taona, Lata Mangeshkar, i Bhat ; nampiseho teny mifamaly eo amin'ireo olona roa ireo. Tao anatin'izany, nampiasa ny “Game of Thrones” (Kilalaon'ny Satroboninahitra) izy, ary namaritra ilay mpihira antitra ho “5000 taona,” nilaza tamin'ny hanihany hoe efa tokony ho faty izy.
Naharay fitarainana roa nikasika ilay lahatsary ny polisin'i Mumbai, renivohitra ara-bola any India, ny iray avy tamin'i Narendra Modià mpanao politika eo an-toerana iray, avy ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana “Bhartiya Janata Party” (BJP), izay nilaza fa manala baràka ilay lahatsary. Ny iray hafa avy tamin'ny vondrona Shiv Sena mpomba ny BJP sady namana akaiky azy avy any Maharashtra, izay nandrahona ny hikasi-tànana an'i Bhat noho ny fananihaniany ireo olo-malaza roa ireo.
Jereo eto ambany ilay lahatsary:
Ny 31 May, nangataka ny Google, Facebook ary Orkut izay sehatra efa maty ankehitriny ny polisy Indiana, mba hibahana ilay lahatsary navoakan'ilay mpanao hatsikana Tanmay Bhat. Tsy nanao fanambaràna ofisialy tamin'ilay raharaha ireo orinasa, fa nanipika tamin'ireo media hafa kosa fa hoesorina ilay votoaty rehefa aroso miaraka amin'ny didy avy any amin'ny fitsaràna manankery manaporofo ny tsy maha ara-dalàna azy araka ny lalàna eo an-toerana. Hatreto aloha, tsy misy marika hoe nisy izany didy izany navoaka, ary tsy nandray fepetra araka ny lalàna tamin'i Tanmay Bhat ny polisy.
Tsy voalohany izao no nifandonan'i Bhat tamin'ireo olo-malaza matanjaka. Teo aloha, efa teo anivon'ny resabe ilay vondrona mpanao hatsikana Indiana “All India Bakchod” (AIB), izay anisany mpanorina azy i Bhat, noho ny fanehoany mamaivay ireo mpilalao sarimihetsika Bollywood-n'ny indostrian'ny sarimihetsika Indiana, tafiditra amin'izany i Deepika Padukone, Ranveer Singh, Alia Bhatt, Arjun Kapoor ary Karan Johar. Nisy fitoriana napetraka, ary nisy fikarohana nataon'ny polisy mikasika ireo hanihany miaro resaka firaisana ara-nofo mivantambantana..
Tamin'io volana Janoary io, niteny ireo polisin'ny tanàna tsy hameno taratasy fitoriana ireo mpilalao ary mpampihomehy rehetra ao amin'ny AIB, amin'ny ‘raharaha heloka bevava’ ny Fitsaràna Antampon'i Bombay. Avy eo, nametraka fangatahana tany amin'ny fitsaràna antampon'i Bombay ireo mpilalao sy mpanao hatsikana, nangataka ny hanafoanana ireo fitorian'ny polisy azy ireo.
Manoratra izao i Amit Varma, mpanoratra tsy miankina avy any Mumbai:
Manoratra izao i Kaushik Moitra avy any Quint:
Nanoratra lahatsoratra Fecebook manohana ny fahalalahana miteny ny Kongresin'ny antoko mpanohitra misy an'ilay mpanao politika Shashi Tharoor:
Ito no nosoratan'ilay mpamoaka lahatsoratra Indiana, The Hindu, taminà matoandahatsoratra nomeny ny lohateny hoe “Tsy misy hanihany: Indiana isika”:
Ito no namehezan'i Ranjita Ganesan, ao amin'ny Rediff, ilay adihevitra:
Milaza ny fitrotroana ny fitoviana sy fahamaroan'ny kolontsaina i India eo amin'ny tontolo manerantany, satria maro ireo karazana vondrompiarahamoninà ara-poko mipetraka any amin'ilay firenena Aziatika Atsimo. Fa ireo karazana zava-nitranga farany, hatrany amin'ny fanafihana fandoroan'olona noho ny ny fihinanana henomby tany Dadri, fanafihana ireo vehivavy mpikatroka mafana fo, ary ireo fitarainan'ny polisy manohitra ny mpanao hatsikana, dia samy manamarika ny fiovàna eo amin'ny fironana ara-piarahamonina, mety hoe avy amin'ilay fiovàn'ny mpitondra ara-politika ny taona 2014.
14 ora izayBangladesh